‘रज्जा रानी’ टिजर : के खिच भन्दैछन् नाजिर ? « Ramailo छ
‘रज्जा रानी’ टिजर : के खिच भन्दैछन् नाजिर ?
नायिका केकी अधिकरी र कलाकार नाजिर हुसेनको शिर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘रज्जा रानी’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । आधा मिनेट लामो टिजरमा नाजिर हुसेन फोकस छन् । केकी सहित अन्य कलाकार टिजरमा छैनन् । यम थापाको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्मलाई रमेश एमके पौडेलले निर्माण गरेका हुन् । ‘रज्जा रानी’ पुष २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । टिजर हेर्नुस् :
‘रज्जा रानी’ तराईका दुई युवा युवतीको प्रेम कथामा आधारित छ । नायिका रेखा थापा विशेष भूमिकामा प्रस्तुत भएको फिल्ममा कामेश्वर चौरसिया, लक्ष्मी बर्देवा, संगीता नापित, अरुण रेग्मी, दीपक क्षेत्री, विनोद निरौला, अनोज पाण्डे, अशोक आचार्य र अनुज थापाको अभिनय छ । ताराप्रकाश लिम्बु र दीपक शर्माको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधाको छायाँकन र कविराज गहतराजको विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ ।